Andro: 13 Febroary 2020
Ny atrikasa “bisikileta” nokarakarain'ny Kaominin'i Métopolitan Istanbul dia namory ny solontena sehatra, akademisiana, fikambanan'ny bisikileta, vondrona mpizahatany ary mpianatra avy amin'ny faritany maro. "Drafitra fanamoriana bisikileta Istanbul" ary "Design" [More ...]
Desambra 2019 Navoakan'ny Scorecard amin'ny fampitana ny orinasa Metro Istanbul. Araka izany, nitondra lalambe 844 153 ireo lalamby tao Istanbul ary nitondra fiara 495 tamin'ny Desambra ary nitondra olona 65 tapitrisa 200 XNUMX. Tiorkia lehibe indrindra [More ...]
Mpiandraikitra ny fitaterana-Sen, na dia teo aza ny fanonerana ny onitra Catenary, izay navadika ho tombony tamin'ny fifanarahana iombonana natao tamin'ny taona 2017, dia naloan'ny TCDD mpizara hafa, noho ny tsy nandoavan'ny TÜVASAŞ ny onitra 2018 volana ho an'ny taona 2019 sy 24. [More ...]
Hüseyin Keskin, Tale jeneralin'ny National Airports Authority (DHMİ) ary Filohan'ny Birao dia nanambara fa ny serivisy mpandeha an-tongotra maherin'ny 0-6 dia nanomboka tao amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. Momba ny foto-kevitra dia ny tale jeneralin'ny Keskin [More ...]
Ny mpitondra fiara fitateram-bahoaka dia nisaotra ny filoha Zorluoğlu, izay nihaona tamin'izy ireo ny maraina ary nanolotra azy ireo manokana. Ny Sekretera jeneralin'ny Trabzon Metropolitan monisipaly Mustafa Kurtuluş, TULAŞ A.Ş. Arif, Tale jeneraly [More ...]
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia manadio ny sisin-dàlana sy ny be loatra ampiasain'ny mpandeha an-tongotra, indrindra amin'ny lalana eny amin'ny aretin-dalambe sy amin'ireo làlana mankany an-dalambe ary noho ny oram-panala mifototra amin'ny renivohitra. Aesthetics Urban [More ...]
Ny tetezana miampita amin'ny hopitaly nataon'ny Gaziantep Metropolitan Municipal ary ny Direction Générale d'Église de l'Église du Ministry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa hialana amin'ny lozam-pifamoivoizana manodidina ny hopitaly Gaziantep City, izay eo am-panamboarahan'ny minisiteran'ny fahasalamana. [More ...]
Tetikasa fiaramanidina haingam-pandeha ambony Ankara-Sivas Kayaş-Elmadağ Fizarana fotodrafitrasa fananganana fotodrafitrasa Ankara-Sivas Ankara-Sivas High miaraka amin'ny vidiny TL 2020 an'ny Tiorka State Railway Management (TCDD) [More ...]
Mba hanohanana ny fampandrosoana ny indostrian'ny rafitry ny lalànan'ny firenentsika sy ny fandrosoana manokana ny injeniera miasa ao amin'ny sehatry ny rafitry ny lalamby nataon'ny Rail Systems Association (RSD), indrindra fa Ankara, Istanbul ary Eskişehir. [More ...]
Hiezaka ny hanao ny feom-pahalalana ny olom-pirenena amin'ny fihetsiketsehana fa tsy ho mandeha ny garan-dalamby manan-tantara. Tranon-tsarimihetsika Derbent manan-tantara any Kartepe, eo anelanelan'i Köseköy sy Pamukova avy amin'ny Tale jeneralin'ny orinasa Railway Enterprise. [More ...]
Ny Coronavirus, izay nanomboka tany Chine ary nanahirana an'izao tontolo izao dia tena nisy fiantraikany tamin'ny toe-karena. Raha orinasa maro no nampijanona ny famokarana any Sina, nofoanana ny Kongresy Eran-tany (Mobile World Congress). Ny fanafoanana ny kaongresy dia nisy fiantraikany amin'ny drafitra TOGG ihany koa. [More ...]
Ny làlan-drovona feno fotaka mandritra ny asa ao amin'ny toeran'ny Akyazı ao amin'ny lalam-be Marmara Avaratra dia diovan'ny Kaominista Akyazı. Ny làlambe Marmara, izay handalo ny Distrikan'i Akyazı ao Sakarya; Osmanbey dia eo amin'ny làlana lehibe noho ny asany ao amin'ny fizarana mizaha ao amin'ny Distrikan'i Eskibedil. [More ...]
Manodidina ny 20 ny asa tanana momba ny Cypriot sy ny kanto eran-tany Tiorka, ao amin'ny "Museum G Artsel Art", izay hisokatra ao amin'ny Nicosia Derebo amin'ny 700 febroary, andro hanentanana. Ny firenentsika sy ny firenentsika [More ...]